Tamin’io talata io tokony ho tamin’ny 11 atoandro dia nisy vehivavy tonga nametraka fitarainana teo anivon’ny Kaomisarian’ny Boriborintany faha-07 noho ny fanendahana izay nahazo azy raha nandalo teny amin’ny JIRAMA andavamamba izy ka nikasa ny hody eny Antohomadinika. Raha ny filazany dia lehilahy maromaro no nanakana azy tamin’io fotoana io ka ny sasany nisintona ny poketrany ary raha niezaka nanohitra iny izy dia nodarohan’ireo olon-dratsy. Rehefa azon’izy ireo ilay poketra dia lasa nandositra niditra elakela-trano ka tsy tratran’ireo manodidina izay nanenjika azy ireo rehefa naheno ny antso vonjin’ilay voaendaka.
Lasan’izy ireo tamin’izany ny finday 1, elo iray, vola 10.000 ariary. Noho ny ratra nahazo azy dia voatery namonjy toeram-pitsaboana ity vehivavy ity. Nanao fanadihadiana avy hatrany ny polisy ka tokony ho tamin’ny 5 ora hariva no hitan’ny polisy niaraka tamin’ny mpitory teny amin’ny faritra manodidina ny Jesosy mamonjy 67ha ny 2 tamin’ireo mpanendaka. Nosamborina avy hatrany hanaovana fanadihadiana. Nandà tanteraka ny fiampangana azy ireto 02 lahy voasambotra ireto. Nanizingizina ilay vehivavy mpitory fa anisan’ny nanendaka azy izy 02 lahy ireo ary ny 1 tamin’izy ireo aza no nidaroka azy ka nahatonga ny faharatrany. Natolotra ny fitsarana izy ireo ary nidoboka am-ponja vonjimaika ny iray raha toa ka nahazo fahafahana vonjimaika ny 1 hafa.